ကိုဗဈအခဈြ – My Blog
မမမိုး စိတျလနေပေါသညျ. ယောကျြားကမလေးရှားမှာအလုပျသှားလုပျတာ၆လပဲရှိသေးသညျ.. တနတေ့ခါတောငျဖုနျးမဆကျဘူး.အလုပျမြားလို့ဆိုပီး အကွောငျးပွနသေညျ.. ဒီကွားထညျးကိုဗဈကပျေါလာပွနျ သညျ..အိမျမှာယောက်ျခမရယျ..ယောကျြားရဲ့ညီရယျ.မမိုးရယျသုံးယောကျထညျးရှိသညျ.. …..အသကျ၅၀ယောကျခမကစာအုပျဖတျလိုကျအိပျလိုကျနှငျ့ဟုတျနသေညျ..
မတျတျောမောငျ ကလညျးဖုနျးပှတျလိုကျ အိပျလိုကျနှငျ့သာယာနကွေသညျ.. ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ဘယျမှမထှကျခငျြကွအိမျတှငျးအောငျးကာလဖွဈပသေညျ.. တိုကျခနျးမှာနကွေသဖွငျ့အခနျးသုံးခနျး မှာတယောကျတခနျးအောငျးရငျအခြိနျဖွုနျးနရေတာငွီးငှစေ့ရာပေ… …….တနတေ့နဖေ့ဘှေ့တျနဲ့တငျအခြိနျကုနျလသေညျ.. …”ဟဲ့.အောငျလေး..နငျအပွငျမသှားဘူးလား”. .အောငျလေးဆိုသညျမှာ ယောကျြားရဲ့ညီဖွဈသညျ.. ..အဝေးသငျတကျနပေီးအလုပျမရှိသေးပေ.. ..”မမိုးရယျ ကိုဗဈမြားနလေို့ဘယျမှမသှား ခငျြဘူး..”. . …”နငျမသှားရငျင့ကိုဇတျကွောဆှဲပေးဟာ အိပျလိုကျစားလိုကျနဲ့အကွောတကျနလေို့” …အောငျလေးအသကျ၁၈နှဈရှိပီ.. ရီးစားထားတာလဲမတှရေ့..အပွငျအလညျအပတျလဲမသှား အိမျမွဲသူဖွဈသညျ… ခိုငျးရငျတော့လုပျပေးတတျပွီးလိမျမာလသေညျ…
…”ဟုတျ..မမိုး..ခဏလေးနျော..ဒါလေးပီးရငျလာနှိပျပေးမယျ”. . ဂိမျးဆော့နရေငျးနဲ့မို့..ပီးရငျလာမယျပွောလသေညျ… အောငျလေးက သူ့အမကေိုအမွဲနှိပျပေးနကွေဖွဈ၍.. မမိုးလညျးအနှိပျခံခငျြမိသညျ.. …မမိုး ဧညျ့ခနျးခုံမှာထိုငျရငျး တီဗီ ကွညျ့ပီး စောငျ့နလေသေညျ… ..အမှနျတော့ အောငျလေး ဂိမျးမဆော့ပါ ဖဘှေ့တျမှာ ဆျောကွူနခွေငျးဖွဈသညျ. ..အောငျလေးက ကုနျကမွငျးလေးဖွဈသညျ..အိမျမှာဆိုလိမျမာသလိုနှငျ့အပွငျမှာ ဆျောအရမျးကွောငျသညျ.. ရပျကှဲထဲမှာတော့မကွောငျပါ..ကြောငျးတတျခြိနျဆိုရငျ အိုးကောငျးတဲ့ဆျောကိုမှရှေးပီးကွောငျသညျ..ရရငျ ခြိနျးတှပေီ့း နို့နှိုကျဖငျကိုငျလုပျသညျ..ဘှတျလို့ရရငျလညျး ဘှတျသညျ.
.အောငျလေးကဆျောကွညျဘဲစာရငျးထဲပါသညျ ရုပျခြောလို့ဖွဈသညျ.. ယခု မကျဆငျဂြာမှာ ဆျောဖနျနသေညျ.. ရရငျ အပွငျမှာခြိနျးတှဖေို့ခြိနျးသညျ.. ဆျောကလကျမခံရငျ နောကျတယောကျရှာသညျ… …”မမိုးရေ..ပီးပီ နှိပျရတော့မလား”. . “လာဟာ.ခုံပျေါမှာပဲနှိပျတော့”. . “ခုံပျေါမှာအဆငျမပွဘေူးဗြ..မမိုးကအောကျမှာထိုငျ ကနြျောက ခုံပျေါကဆိုရငျ.. နှိပျရတာလှယျတယျဗြ..ဒါမှမဟုတျမှောကျအိပျလိုကျ”. .. မမိုး ဖွာတခပျြခငျးလိုကျပီး မှောကျပေးလသေညျ… မမိုး၏ ကွော့ရှငျးသောကိုယျလုံးကို အောငျလေးအနောကျမှကွညျ့နေ၍.. စိတျထဲမရိုးမရှဖွဈနလေသေညျ.. လဝေငျလထှေကျနညျးသောတိုကျခနျးကွောငျ့ ပူအိုကျသလိုဖွဈနသေညျ.. မမိုး အငျးကြီ အပါးလေးဝတျထားသညျ. အတှငျးဘျောလီကွိုးကမွငျနရေသညျ..
ခါးလေးမှာနိမျ့ဆငျးနပေီး..တငျသားမှာ လုံးဝနျး၍ ကော့တကျနသေညျ.. ထမိနျ ဝတျထားသောကွောငျ့ ဖွူလားမဲလားမသိရ… …”မမိုး..ပရုတျဆီလေးနဲ့ နှိပျမလား”. . “အေး..အဆငျပွသေလိုလုပျလိုကျ”. . ထိုအခါအောငျလေးက… “ခွထေောကျကစပီးနှိပျပေးမယျနျော.. ပီးမှ အပျေါနှိပျမယျ”. . “အေးပါ”. .ဟုမမိုးကပွောပီး.. ဖုနျး ယူကာ ဖဘှေ့တျကွညျ့နလေသေညျ.. “မမိုး ဖဘှေ့ကျ အကောငျ့ပေးထားလေ.. ကနြျောလညျးသုံးတယျ.သူငယျခငျြး ဖွဈရတာပေါ့” ..မမိုးအကောငျ့ပေးလသေညျ..အောငျလေးဖုနျး ယူပီး အပျ လိုကျလသေညျ.. ထို့နောကျ ခွဖေဝါးမှစနှိပျလိုကျသညျ… အောငျလေး ယခုမှအသားထိရ၍.. မမိုး အသားအရညျနုညံ့တာသိရသညျ.. ထမိနျကို အသာလှနျကာခွသေလုံးသားဖွူအိလေးကိုနှိပျလိုကျသညျ… “မမိုးခွသေလုံးနဲ့ပေါငျကို ပရုတျဆီလိမျးမယျနျော အာ့မှအညောငျးသကျသာမှာ”. . မမိုးမှာဖဘှေ့တျ ပှတျနရေငျးစဉျးစားလိုကျသညျ.. အောငျလေးမှာကိုယျ့မောငျအရှယျဆိုတော့ပေါငျနှိပျလဲဘာမှမဖွဈပါဘူး လေ… ထို့ကွောငျ့… “အေးအေး..ပေါငျထိပဲလုပျ ပီးရငျခါးနဲ့ ဂုတျဆကျလုပျလိုကျနျော”ဟုပွောလိုကျသညျ…
အမဖွေဈသူအဖှားကွီးမှာ အခနျးထဲတှငျ အိပျနလေသေညျ.. အောငျလေး အခှငျ့အရေးရလပေီ.. ထို့ကွောငျ့ မမိုး၏ ထမိနျကို ပေါငျးအရငျးထိလှနျတငျလိုကျပီးပရုတျဆီပှတျလသေညျ… ပေါငျသားမြားမှာ အမာရှတျမရှိ ဖွူအိနကွေသညျ… အတှငျးခံအဖွူလေးပါမွငျရသညျ.. အောငျလေး လီးတောငျပါတော့သညျ… မမိုးတငျသားမြားမှာ ကားကား လုံးလုံးလေးဖွဈသညျ…
အောငျလေး အသာလေးဖှဖှနှိပျပေးနယျပေးနမေိသညျ.. ဘေးမှထိုငျနှိပျရတာအဆငျမပွေ.. “မမိုး ကနြျော ခွသေလုံးမှာထိုငျပီးနှိပျမယျနျောဘေးကနှိပျရတာအဆငျမပွဘေူး”. .. ဟုပွောပီး တကျခှလသေညျ… ပေါငျမြားကိုနှိပျပီး ခါးအထိနှိပျရနျ အပျေါနဲနဲရှရေ့လသေညျ… အငျးကြီမလှနျပဲနှိပျသဖွငျ့ပရုတျဆီလိမျးလို့မရပေ.. “မမိုး ခါးကို ပရုတျဆီလိမျးရမလား”. . “အငျးနဲနဲပဲလိမျး ပူတယျ”. . အောငျလေး ပေါငျအထိတကျထိုငျရလသေညျ.. ထိုအခါပုဆိုးအတှငျးမှ ငပဲက ထောငျလာပီး ခါးကိုလှမျးနှိပျပှတျလိုကျတိုငျး တငျသားနှဈခုကွားပှတျဆှဲသလိုဖွဈနသေညျ…
“အောငျလေး ရပီ ဂုတျပဲနှိပျတော့”ဟု မမိုးကပွောလာသညျ.. အောငျလေး ဖီးငုတျလပေီ..သူမ ပေါငျပျေါမှဆငျးပီး…ဘေးမှထိုငျ၍.. ဂုတျကွောဆှဲရတော့သညျ.. မမိုးမှာ တထောငျဆဈထောကျ၍ဖုနျး ကွညျ့သဖွငျ့..အမို့အမောငျ ပွညျ့စုံသော တငျသားနှငျ့ပေါငျခွသေလုံးတို့ကို အဆငျးလိုကျမွငျနရေသညျ.. တငျပုလငျခှထေိုငျပီး ဂုတျနှိပျသဖွငျ့ တခကျြတခကျြ နို့ဘေးသားအိအိကိုဒူးနှငျ့ပှတျသလိုဖွဈပွနျသညျ… မမိုးသညျ အကို၏ မိနျးမဖွဈနေ၍.. အနအေထိုငျသတိထားရလသေညျ… အောငျလေး စိတျလြော့ထားရသညျ.. …မမိုး သိနသေညျ တငျနှဈခုကွား လီးတခကျြတခကျြပှတျမိနေ၍ ဂုတျကိုပွောငျးနှိပျခိုငျးရသညျ.. မတျောတဆ အမထှေကျလာလို့တှရေ့ငျ အထငျလှဲသှားနိုငျသညျ..
ထို့ကွောငျ့.. “အောငျလေး.ကြေးဇူးပဲဟာ.ခုမှသကျသာတော့တယျ..နောကျနမှေ့ ဆကျနှိပျကွတာပေါ့”ဟုဆိုကာ ထထိုငျပီး ဖုနျး ဆကျပှတျနသေညျ… အောငျလေးဘာမှမတတျနိုငျပါ.. အိမျသာသှားပီး ထုရလတေော့သညျ… … .ညနဘေကျမမိုးရခြေိုးလသေညျ.. အောငျလေးမှာ ကိုဗဈကွောငျ့ အပွငျမထှကျနိုငျ၍ ဆျောမြားကို မငမျးနိုငျပေ..ထို့ကွောငျ့ မရီးဖွဈသူကို ခြောငျးရနျတှေးရပတေော့သညျ.. ရခြေိုးခနျးတခါးမှာ အောကျဘကျနားတှငျ ဆှေးနေ၍..အပေါကျလို နဲနဲဟနသေညျ. ထို့ကွောငျ့ အမအေိမျရှမှေ့ာစာဖတျနစေဉျ ရခြေိုးခနျးတံခါးနားပွေးကပျ ဝမျးလြားမှောကျကာ ဆှေးသောနရောမှ ခြောငျးလသေညျ.. မမိုးထိုငျပီး ဂြေးတှနျးနသေညျ.. အဝတျအကုနျခြှတျခြိုးသဖွငျ့..မမိုး၏.. လှပသော အဖုတျနှငျ့ တငျသားမြားကိုမွငျရသညျ… ရစေီးကွခြိနျ တငျသားမြားမှာပွောငျဝငျးနကွေသညျ…
..အောငျလေး အမွနျခြောငျးပီးအိမျရှပွေ့နျသှားရလသေညျ… အောငျလေးမမိုးကို လိုးခငျြနမေိသညျ.. ထို့ကွောငျ့ မွူဆှယျရနျအကွံထုတျလသေညျ… မမိုးရခြေိုးပီနောကျ အဝတျအစားလဲပီး အိမျရှထှေ့ကျကာဖုနျးပှတျနသေညျ.. အောငျလေးဖဘှေ့တျဖှငျ့လိုကျပီး…ဖဘှေ့တျ တှငျ ဆကျဆီ မျောဒယျ ပုံတခုတငျလသေညျ… …သိပျမကွာခငျမှာ မမိုးလာကွညျ့တာသိရလသေညျ… “ဟဲ့ အောငျလေး ဘာပုံတှတေငျနတောလဲ လှလဲမလှဘူး”. . “လှပါတယျဗြ..မမိုးလောကျတော့ဘယျလှမလဲ..ဟားဟား”. .. မမိုးလဲ ပငျြးနေ၍.စနောကျရနျ စဉျးစားပီး “ငါ လှတာ နငျသိလို့လား ချချ..” “သိတာပေါ့..နလေ့ညျနှိပျတုနျးက”. . “အမလေး နငျလညျးမလှယျပါလား.. ရီးစားထားတော့”. .. မမိုးသညျ အောငျလေးဆျောမရှိဘူးထငျနသေညျ…
“ကနြျော အေးဆေးနပေရဇဗြော.. ခုနက ပုံလေးတှကွေညျ့ပီးစိတျဖွနေရေတာ”. . “အမယျ အဲ့ဟာတှဘေယျကရတာတုနျး” အောငျလေးဖဘှေ့တျထဲမှာ ဘယျသူမှမမွငျအောငျ တငျထားသော အောပုံနှငျ့အောစာမြား အောကားမြားရှိလသေညျ… တယောကျထဲမွငျအောငျလုပျထား၍.. မမိုးသူ့အကောငျ့ဝငျကွညျ့လညျး ဘာမှမတှရေ့ပေ… “ကနြျောက အကောငျ့ထဲသိမျးထားတာဗြ တခါတလမှေကွညျ့တာ..ကနြျော မမိုးကိုပွမယျ..မကျဆငျဂြာမှာပို့လိုကျမယျ ကွညျ့လိုကျ”. .. အောငျလေး ပုံတခုရှေးလိုကျသညျ.. ဘောလီမဝတျပဲ အငျးကြီအပါးသာဝတျထားသောမျောဒယျပုံဖွဈသညျ.. နို့သီးခေါငျးနှငျ့လှပသောနို့လုံးကို ပါးပါးလေးမွငျရသောပုံဖွဈသညျ.. မမိုးဆီပို့လိုကျလသေညျ…
“ဟဲ့ ဘာကွီးလဲဟ အဲ့တာပို့စရာလား”. . “မဆနျးပါဘူး မမိုးရယျ..မမိုးလဲရှိတာပဲဟာ”. .. “ဟဲ့ အဲ့လို မပွောရဘူးလေ ငါကနငျ့အမနျော..ဟှငျး”. .. မကျြစောငျးထိုးလသေညျ… “ကို့အမ မို့ပွတာပါ တခွားသူပွစရာလား ဒီမှာကွညျ့ အကောငျ့မှာ ဘယျသူမှမမွငျအောငျထားတာ”. . အောငျလေး သူ့ဖဘှေ့တျထဲမှ တငျထားတာမြား မမိုးကိုပွလသေညျ.. လိုးသညျ့ပုံမြားပငျပါလသေညျ… “တျောပီ နငျ့ဖာသာကွညျ့တော့ ရှကျစရာတှေ”. .. “ဟားဟား..မမိုးကလညျးရှကျစရာလား. ကနြျောက လကေ့ငျြ့နတောဗြ ဆျောရရငျ စမျးကွညျ့မလို..”. .. မမိုးတယောကျ ပါးစပျက မကွိုကျဖူးပွောနပေဲ စိတျထဲ ယောကျယကျခကျနသေညျ… မတျတျောသူုဖွဈ၍ ဘာမှမပွောတော့ပဲ.. ကို့ဖဘှေ့တျကိုပွနျကွညျ့နတေော့သညျ..ညအိပျကွလသေညျ..
တယောကျတခနျးဆီမို့ ဟိုဘကျဒီဘကျမမွငျမကွားရပေ… မမိုးအိပျလို့မရပါ လငျယောကျြားကလဲ စာမပို့ ဖုနျးမချေါနှငျ့မို့ပငျြးနလေသေညျ.. ..ထို့စဉျ စာဝငျလာသညျ… “မမိုးအိပျပီလားဗြ”. . “မအိပျနိုငျပါဘူးဟာ..အမွဲတမျးလှဲနရေတော့ အညောငျးမိတယျ”. . အနှိပျခံခငျြသလိုဖွဈနသေညျ… “လာနှိပျပေးမယျလေ ကနြျောလညျးအိပျလို့မရဘူး”. .. ယောကျခမလညျးအိပျနပေီဖွဈ၍.. “အငျး..လာခဲ့ ပရုတျဆီပါယူခဲ့ဟာ”. . မမိုး စဉျးစားမိသညျ အောငျလေးမှာအခွောကျကလေးလိုနေ၍ စျောမရှိပဲ အောပုံမြားကွညျ့ကာစိတျဖွသေညျထငျသညျ.. သူမ ၏ ကိုယျလုံးကိုမွငျ၍စိတျဖွနေလေညျး ကိစ်စမရှိပေ ကိုယျ့ကို မလုပျရငျပီးတာပဲဟုတှေးမိသညျ.. ထို့ကွောငျ့ လာနှိပျရနျချေါလသေညျ.. အောငျလေး ဘောငျးဘီ အပှဝတျထားသညျ အောကျခံက မဝတျထား… ..အဆငျပွရေငျ လိုးမညျဟုတှေးမိနေ၍ဖွဈသညျ.. မမိုးအခနျးထဲရောကျလသေညျ.. “မမိုး နလေ့ညျကလိုနှိပျပေးမယျနျော”. . “အငျး နှိပျ ငါလညျးနငျ့အကိုဆီ စာပို့နတော ခုထိ စာမပွနျဘူး စောငျ့လိုကျအုံးမယျ”. . သူမ ဖုနျးဆကျပှတျနသေညျ…
အခနျးထဲ မီးပိတျထားပီး ညမီးသေးသေးလသောဖှငျ့လသေညျ.. အောငျလေး ခွဖေဝါးနှငျ့ ခွသေလုံးပေါငျမြားကို နှိပျပေးနရေငျး. “မမိုး တငျတှရေောနှိပျရမလား..”. . မမိုး က အတှငျးခံ မခြှတျလဲရတာပဲတှေးပီး “အပွငျကနှိပျနျော ပီးရငျခါးနှိပျ”. . အောငျလေး တငျသားမြားကို ဖွေးဖွေးညဈပေးလသေညျ… လကျမနှဈခြောငျးက အတှငျးခံအောကျခွနေားမှ တငျသားနရောကို ဖိနှိပျပေးသလိုကနျြလကျခြောငျးမြား အပျေါပိုငျးတငျကို ပှတျပေးလိုကျသညျ.. “အငျး အဲ့လိုက ကောငျးသားဟ.ဘလိုလုပျတတျနတောလဲဟ”. . “ဗီဒီယိုကွညျ့ပီးလလေ့ာရတာပေါ့မမိုးရဲ့. ကနြျောကောငျးကောငျးလုပျပေးမယျ.ငွိမျငွိမျလေးနေ”. . အောငျလေး လကျမြား ခါးမှ အငျးကြီးအောကျအသာဝငျဝငျပီး ခါးမှတငျဘေးသားကို ပှတျနှိပျပေးရငျး အတှငျးခံကိုအသာလေး ဆှဲခလြသေညျ တငျသားဝငျးဝငျးကွီးကတဝကျပျေါလာလသေညျ..
ထိုမှတဆငျ့..တငျသားအုံကွီးကို ဖွေးဖွေးနယျပေးလသေညျ… မမိုးကောငျးလှနျးပီး တငျကော့တကျလာသညျ.. အဖုတျတှငျးမှာလညျးယားလာလသေညျ. ထို့နောကျအောငျလေးက.. ပေါငျအရငျးကိုပွနျနှိပျ ပီးလကျမမြားက စအိုဘေးသားမြားကိုနှိပျပေးလသေညျ.. အတှငျးခံဘောငျးဘီအလယျကိုစုကိုငျလိုကျရာ..အဖုတျ မွောငျးအတှငျး အတှငျးခံအသားကမွုတျဝငျလသေညျ.. မမိုးငွိမျခံရငျးတှေးနသေညျ… တကယျလို့အောငျလေးသာလိုးရငျမညျသူမြှမသိပေ.သို့သျော သူ့မရီးဖွဈနေ၍ကွညျ့ရုံသာကွညျ့ပီးနှိပျပေးကာ လိုးမညျမထငျ..ခံလို့ကအရမျးကောငျးနသေညျ.. အောငျလေး သူ့ဘောငျးဘီအပှကိုအသာလေးခြှတျနသေညျ.. မမိုး၏ အတှငျးခံအပြော့လေးကို ဘေးသို့ဖယျက လကျမက အဖုတျဘေးမြားကိုပါနှိပျလသေညျ..
အရညျစိုစပွုနသေောအဖုတျကိုတှလေ့သေညျ.. လူငယျပမေဲ့လီးက ၇လကျမလောကျရှညျသညျ.. ပေါငျဖွဲလိုးစရာမလိုပဲ..ကော့တကျနသေောတငျသားကွောငျ့ အသာလေးလိုးနိုငျပသေညျ.. ခကျြခငျြးမလိုးသေးပဲ လကျတဖကျက တငျနှငျ့ခါးကိုနှိပေးသလိုတဖကျကလဲ အဖုတျဘေးသားနှငျ့ အစိကို ပှတျနပွေနျသညျ.. “မမိုးကောငျးလားဟငျ..”. . “အငျး ကောငျးလှနျးလို့ အိပျပြျောတော့မယျ”. . “အိပျလေ အမရဲ့ ကနြျော ဖွေးဖွေးနှိပျမှာပါ”. .. မမေိုးတကယျမကျြစိစငျးနလေသေညျ… တခါမှမခံဖူးသောအရသာကိုရ၍.. ဇိမျခံနလေသေညျ.. “ဟဲ့ နငျ့အမနေဲ့အကိုကိုမပွောနဲ့နျော”. . “စိတျခပြါ အမရဲ့ ကနြျောက နှုတျလုံပါတယျနျော”. …. အောငျလေးရှအေ့သာတိုးပီးလီးကို.. အဖုတျဝနှငျ့ပှတျလသေညျ….
မမေိုးက လကျမနှငျ့ပှတျတယျထငျနေ၍ မပွောသလို..စိတျထဲမှာလညျး အလိုးခံခငျြနသေညျ… ထိုစဉျ အောငျလေး လီးဝငျလာလတေော့သညျ့… “အ့.. အောငျလေး..ဘာထဲ့..ဟာ”. . သူမလှညျ့ကွညျ့စဉျမှာပဲ လီးက တဝကျဝငျလသေညျ… အ့..အ့…မလုပျနဲ့ လကျနဲ့ပဲလုပျ… “အမ ရယျ လကျထကျကောငျးတာသိရဲ့သားနဲ့”. .. “နငျ ဘသူ့မှမပွောနဲ့..အ့..အ့..ရှီး…. ကောငျးလိုကျတာ”. . “အမရယျ အဖအဖုတျအရညျတှထှေကျနလေို့လိုးပေးတာ အား…ကောငျးလိုကျတာ..”. . မှောကျယကျကလေး မမိုးရဲ့ တငျသားနှခုကို ဖွဲကိုငျပီး ပေါငျခှ၍ငုတျတုတျလိုးပေးလသေညျ…
မမေိုးအလိုကျသငျ့ကော့ပေးရာ.. လီးတဆုံးဝငျလသေညျ….. လိုးကောငျးလှနျး၍အားမရတော့… ဖငျကွီးကိုဆှဲမထောငျလိုကျပီး…သူမ၏ ပေါငျနှဈလုံးကိုပူးကာ ဆကျတိုကျလိုးပေးလသေညျ… “အမ အဲ့တာ ဘျောဒီ မာဆကျလို့ချေါတယျ နတေို့ငျးလုပျပေးမယျနျော”. .. “မောငျလေးသဘော အခုအမွနျလိုး..အ့.အ့.”. .. ဘှတျ..ဘှတျ..ဘှတျ..လကေနျထှကျနသေညျ… စအိုအတှငျးကိုပါ လကျညှိုးထိုးထဲ့ပေးသဖွငျ့ ပိုမိုကောငျးမှနျလာသညျ…. “မောငျလေး ရယျ တျောလိုကျတာ..ဟငျး”. . အကို မလိုးတာ၆လာလောကျရှိသေးသညျ.. အဖုတျက စညျးစညျးပိုငျပိုငျရှိလှသညျ…
“အမ ညောငျးရငျပကျလကျလှနျ”. . မမိုးလှနျပေးသညျ… အောငျလေး သူမ၏ အငျးကြီးကိုလှနျပီး ဖွူဖွူလုံးလုံးနို့မြားကိုစို့ပေးလသေညျ… “အား..အငျး…အငျး…လိုးပါတော့”. .. သူမပေါငျဖွဲပေးသညျ… အောငျလေးနို့စို့ပေးရငျး ဆကျတိုကျလိုးပေးသညျ… “အ့ အ့ ပီးပီ မရပျနဲ့ အ့ အ့……ရှီး..”. . သူမ တှနျ့ကာ အရညျထှကျခြိနျအောငျလေးလဲ လီးထိပျတငျးလာပီး သုတျပနျးလတေော့သညျ… “အမရယျ အရမျးကောငျးတယျ…..”. . “မောငျလေးက အနှိပျတျောအလိုးတျောလေး.. မမိုး စှဲသှားပီ”. … အောငျလေးလီး အပွငျမထုတျသေးပေ.. တခကျြခကျြ ညဈနသေောအဖုတျအတှငျး လီးကိုစိမျရငျး ထပျလိုးနတေော့သညျ…ရှကွောမွိုငျ ….. ပွီးပါပွီ။
မမမိုး စိတ်လေနေပါသည်. ယောက်ျားကမလေးရှားမှာအလုပ်သွားလုပ်တာ၆လပဲရှိသေးသည်.. တနေ့တခါတောင်ဖုန်းမဆက်ဘူး.အလုပ်များလို့ဆိုပီး အကြောင်းပြနေသည်.. ဒီကြားထည်းကိုဗစ်ကပေါ်လာပြန် သည်..အိမ်မှာယောက်္ခမရယ်..ယောက်ျားရဲ့ညီရယ်.မမိုးရယ်သုံးယောက်ထည်းရှိသည်.. …..အသက်၅၀ယောက်ခမကစာအုပ်ဖတ်လိုက်အိပ်လိုက်နှင့်ဟုတ်နေသည်..
မတ်တော်မောင် ကလည်းဖုန်းပွတ်လိုက် အိပ်လိုက်နှင့်သာယာနေကြသည်.. ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဘယ်မှမထွက်ချင်ကြအိမ်တွင်းအောင်းကာလဖြစ်ပေသည်.. တိုက်ခန်းမှာနေကြသဖြင့်အခန်းသုံးခန်း မှာတယောက်တခန်းအောင်းရင်အချိန်ဖြုန်းနေရတာငြီးငွေ့စရာပေ… …….တနေ့တနေ့ဖေ့ဘွတ်နဲ့တင်အချိန်ကုန်လေသည်.. …”ဟဲ့.အောင်လေး..နင်အပြင်မသွားဘူးလား”. .အောင်လေးဆိုသည်မှာ ယောက်ျားရဲ့ညီဖြစ်သည်.. ..အဝေးသင်တက်နေပီးအလုပ်မရှိသေးပေ.. ..”မမိုးရယ် ကိုဗစ်များနေလို့ဘယ်မှမသွား ချင်ဘူး..”. . …”နင်မသွားရင်င့ကိုဇတ်ကြောဆွဲပေးဟာ အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အကြောတက်နေလို့” …အောင်လေးအသက်၁၈နှစ်ရှိပီ.. ရီးစားထားတာလဲမတွေ့ရ..အပြင်အလည်အပတ်လဲမသွား အိမ်မြဲသူဖြစ်သည်… ခိုင်းရင်တော့လုပ်ပေးတတ်ပြီးလိမ်မာလေသည်…
…”ဟုတ်..မမိုး..ခဏလေးနော်..ဒါလေးပီးရင်လာနှိပ်ပေးမယ်”. . ဂိမ်းဆော့နေရင်းနဲ့မို့..ပီးရင်လာမယ်ပြောလေသည်… အောင်လေးက သူ့အမေကိုအမြဲနှိပ်ပေးနေကြဖြစ်၍.. မမိုးလည်းအနှိပ်ခံချင်မိသည်.. …မမိုး ဧည့်ခန်းခုံမှာထိုင်ရင်း တီဗီ ကြည့်ပီး စောင့်နေလေသည်… ..အမှန်တော့ အောင်လေး ဂိမ်းမဆော့ပါ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဆော်ကြူနေခြင်းဖြစ်သည်. ..အောင်လေးက ကုန်ကမြင်းလေးဖြစ်သည်..အိမ်မှာဆိုလိမ်မာသလိုနှင့်အပြင်မှာ ဆော်အရမ်းကြောင်သည်.. ရပ်ကွဲထဲမှာတော့မကြောင်ပါ..ကျောင်းတတ်ချိန်ဆိုရင် အိုးကောင်းတဲ့ဆော်ကိုမှရွေးပီးကြောင်သည်..ရရင် ချိန်းတွေ့ပီး နို့နှိုက်ဖင်ကိုင်လုပ်သည်..ဘွတ်လို့ရရင်လည်း ဘွတ်သည်.
.အောင်လေးကဆော်ကြည်ဘဲစာရင်းထဲပါသည် ရုပ်ချောလို့ဖြစ်သည်.. ယခု မက်ဆင်ဂျာမှာ ဆော်ဖန်နေသည်.. ရရင် အပြင်မှာချိန်းတွေ့ဖို့ချိန်းသည်.. ဆော်ကလက်မခံရင် နောက်တယောက်ရှာသည်… …”မမိုးရေ..ပီးပီ နှိပ်ရတော့မလား”. . “လာဟာ.ခုံပေါ်မှာပဲနှိပ်တော့”. . “ခုံပေါ်မှာအဆင်မပြေဘူးဗျ..မမိုးကအောက်မှာထိုင် ကျနော်က ခုံပေါ်ကဆိုရင်.. နှိပ်ရတာလွယ်တယ်ဗျ..ဒါမှမဟုတ်မှောက်အိပ်လိုက်”. .. မမိုး ဖြာတချပ်ခင်းလိုက်ပီး မှောက်ပေးလေသည်… မမိုး၏ ကြော့ရှင်းသောကိုယ်လုံးကို အောင်လေးအနောက်မှကြည့်နေ၍.. စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်နေလေသည်.. လေဝင်လေထွက်နည်းသောတိုက်ခန်းကြောင့် ပူအိုက်သလိုဖြစ်နေသည်.. မမိုး အင်းကျီ အပါးလေးဝတ်ထားသည်. အတွင်းဘော်လီကြိုးကမြင်နေရသည်..
ခါးလေးမှာနိမ့်ဆင်းနေပီး..တင်သားမှာ လုံးဝန်း၍ ကော့တက်နေသည်.. ထမိန် ဝတ်ထားသောကြောင့် ဖြူလားမဲလားမသိရ… …”မမိုး..ပရုတ်ဆီလေးနဲ့ နှိပ်မလား”. . “အေး..အဆင်ပြေသလိုလုပ်လိုက်”. . ထိုအခါအောင်လေးက… “ခြေထောက်ကစပီးနှိပ်ပေးမယ်နော်.. ပီးမှ အပေါ်နှိပ်မယ်”. . “အေးပါ”. .ဟုမမိုးကပြောပီး.. ဖုန်း ယူကာ ဖေ့ဘွတ်ကြည့်နေလေသည်.. “မမိုး ဖေ့ဘွက် အကောင့်ပေးထားလေ.. ကျနော်လည်းသုံးတယ်.သူငယ်ချင်း ဖြစ်ရတာပေါ့” ..မမိုးအကောင့်ပေးလေသည်..အောင်လေးဖုန်း ယူပီး အပ် လိုက်လေသည်.. ထို့နောက် ခြေဖဝါးမှစနှိပ်လိုက်သည်… အောင်လေး ယခုမှအသားထိရ၍.. မမိုး အသားအရည်နုညံ့တာသိရသည်.. ထမိန်ကို အသာလှန်ကာခြေသလုံးသားဖြူအိလေးကိုနှိပ်လိုက်သည်… “မမိုးခြေသလုံးနဲ့ပေါင်ကို ပရုတ်ဆီလိမ်းမယ်နော် အာ့မှအညောင်းသက်သာမှာ”. . မမိုးမှာဖေ့ဘွတ် ပွတ်နေရင်းစဉ်းစားလိုက်သည်.. အောင်လေးမှာကိုယ့်မောင်အရွယ်ဆိုတော့ပေါင်နှိပ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး လေ… ထို့ကြောင့်… “အေးအေး..ပေါင်ထိပဲလုပ် ပီးရင်ခါးနဲ့ ဂုတ်ဆက်လုပ်လိုက်နော်”ဟုပြောလိုက်သည်…
အမေဖြစ်သူအဖွားကြီးမှာ အခန်းထဲတွင် အိပ်နေလေသည်.. အောင်လေး အခွင့်အရေးရလေပီ.. ထို့ကြောင့် မမိုး၏ ထမိန်ကို ပေါင်းအရင်းထိလှန်တင်လိုက်ပီးပရုတ်ဆီပွတ်လေသည်… ပေါင်သားများမှာ အမာရွတ်မရှိ ဖြူအိနေကြသည်… အတွင်းခံအဖြူလေးပါမြင်ရသည်.. အောင်လေး လီးတောင်ပါတော့သည်… မမိုးတင်သားများမှာ ကားကား လုံးလုံးလေးဖြစ်သည်…
အောင်လေး အသာလေးဖွဖွနှိပ်ပေးနယ်ပေးနေမိသည်.. ဘေးမှထိုင်နှိပ်ရတာအဆင်မပြေ.. “မမိုး ကျနော် ခြေသလုံးမှာထိုင်ပီးနှိပ်မယ်နော်ဘေးကနှိပ်ရတာအဆင်မပြေဘူး”. .. ဟုပြောပီး တက်ခွလေသည်… ပေါင်များကိုနှိပ်ပီး ခါးအထိနှိပ်ရန် အပေါ်နဲနဲရွှေ့ရလေသည်… အင်းကျီမလှန်ပဲနှိပ်သဖြင့်ပရုတ်ဆီလိမ်းလို့မရပေ.. “မမိုး ခါးကို ပရုတ်ဆီလိမ်းရမလား”. . “အင်းနဲနဲပဲလိမ်း ပူတယ်”. . အောင်လေး ပေါင်အထိတက်ထိုင်ရလေသည်.. ထိုအခါပုဆိုးအတွင်းမှ ငပဲက ထောင်လာပီး ခါးကိုလှမ်းနှိပ်ပွတ်လိုက်တိုင်း တင်သားနှစ်ခုကြားပွတ်ဆွဲသလိုဖြစ်နေသည်…
“အောင်လေး ရပီ ဂုတ်ပဲနှိပ်တော့”ဟု မမိုးကပြောလာသည်.. အောင်လေး ဖီးငုတ်လေပီ..သူမ ပေါင်ပေါ်မှဆင်းပီး…ဘေးမှထိုင်၍.. ဂုတ်ကြောဆွဲရတော့သည်.. မမိုးမှာ တထောင်ဆစ်ထောက်၍ဖုန်း ကြည့်သဖြင့်..အမို့အမောင် ပြည့်စုံသော တင်သားနှင့်ပေါင်ခြေသလုံးတို့ကို အဆင်းလိုက်မြင်နေရသည်.. တင်ပုလင်ခွေထိုင်ပီး ဂုတ်နှိပ်သဖြင့် တချက်တချက် နို့ဘေးသားအိအိကိုဒူးနှင့်ပွတ်သလိုဖြစ်ပြန်သည်… မမိုးသည် အကို၏ မိန်းမဖြစ်နေ၍.. အနေအထိုင်သတိထားရလေသည်… အောင်လေး စိတ်လျော့ထားရသည်.. …မမိုး သိနေသည် တင်နှစ်ခုကြား လီးတချက်တချက်ပွတ်မိနေ၍ ဂုတ်ကိုပြောင်းနှိပ်ခိုင်းရသည်.. မတော်တဆ အမေထွက်လာလို့တွေ့ရင် အထင်လွဲသွားနိုင်သည်..
ထို့ကြောင့်.. “အောင်လေး.ကျေးဇူးပဲဟာ.ခုမှသက်သာတော့တယ်..နောက်နေ့မှ ဆက်နှိပ်ကြတာပေါ့”ဟုဆိုကာ ထထိုင်ပီး ဖုန်း ဆက်ပွတ်နေသည်… အောင်လေးဘာမှမတတ်နိုင်ပါ.. အိမ်သာသွားပီး ထုရလေတော့သည်… … .ညနေဘက်မမိုးရေချိုးလေသည်.. အောင်လေးမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် အပြင်မထွက်နိုင်၍ ဆော်များကို မငမ်းနိုင်ပေ..ထို့ကြောင့် မရီးဖြစ်သူကို ချောင်းရန်တွေးရပေတော့သည်.. ရေချိုးခန်းတခါးမှာ အောက်ဘက်နားတွင် ဆွေးနေ၍..အပေါက်လို နဲနဲဟနေသည်. ထို့ကြောင့် အမေအိမ်ရှေ့မှာစာဖတ်နေစဉ် ရေချိုးခန်းတံခါးနားပြေးကပ် ဝမ်းလျားမှောက်ကာ ဆွေးသောနေရာမှ ချောင်းလေသည်.. မမိုးထိုင်ပီး ဂျေးတွန်းနေသည်.. အဝတ်အကုန်ချွတ်ချိုးသဖြင့်..မမိုး၏.. လှပသော အဖုတ်နှင့် တင်သားများကိုမြင်ရသည်… ရေစီးကြချိန် တင်သားများမှာပြောင်ဝင်းနေကြသည်…
..အောင်လေး အမြန်ချောင်းပီးအိမ်ရှေ့ပြန်သွားရလေသည်… အောင်လေးမမိုးကို လိုးချင်နေမိသည်.. ထို့ကြောင့် မြူဆွယ်ရန်အကြံထုတ်လေသည်… မမိုးရေချိုးပီနောက် အဝတ်အစားလဲပီး အိမ်ရှေ့ထွက်ကာဖုန်းပွတ်နေသည်.. အောင်လေးဖေ့ဘွတ်ဖွင့်လိုက်ပီး…ဖေ့ဘွတ် တွင် ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ပုံတခုတင်လေသည်… …သိပ်မကြာခင်မှာ မမိုးလာကြည့်တာသိရလေသည်… “ဟဲ့ အောင်လေး ဘာပုံတွေတင်နေတာလဲ လှလဲမလှဘူး”. . “လှပါတယ်ဗျ..မမိုးလောက်တော့ဘယ်လှမလဲ..ဟားဟား”. .. မမိုးလဲ ပျင်းနေ၍.စနောက်ရန် စဉ်းစားပီး “ငါ လှတာ နင်သိလို့လား ခ်ခ်..” “သိတာပေါ့..နေ့လည်နှိပ်တုန်းက”. . “အမလေး နင်လည်းမလွယ်ပါလား.. ရီးစားထားတော့”. .. မမိုးသည် အောင်လေးဆော်မရှိဘူးထင်နေသည်…
“ကျနော် အေးဆေးနေပရဇေဗျာ.. ခုနက ပုံလေးတွေကြည့်ပီးစိတ်ဖြေနေရတာ”. . “အမယ် အဲ့ဟာတွေဘယ်ကရတာတုန်း” အောင်လေးဖေ့ဘွတ်ထဲမှာ ဘယ်သူမှမမြင်အောင် တင်ထားသော အောပုံနှင့်အောစာများ အောကားများရှိလေသည်… တယောက်ထဲမြင်အောင်လုပ်ထား၍.. မမိုးသူ့အကောင့်ဝင်ကြည့်လည်း ဘာမှမတွေ့ရပေ… “ကျနော်က အကောင့်ထဲသိမ်းထားတာဗျ တခါတလေမှကြည့်တာ..ကျနော် မမိုးကိုပြမယ်..မက်ဆင်ဂျာမှာပို့လိုက်မယ် ကြည့်လိုက်”. .. အောင်လေး ပုံတခုရွေးလိုက်သည်.. ဘောလီမဝတ်ပဲ အင်းကျီအပါးသာဝတ်ထားသောမော်ဒယ်ပုံဖြစ်သည်.. နို့သီးခေါင်းနှင့်လှပသောနို့လုံးကို ပါးပါးလေးမြင်ရသောပုံဖြစ်သည်.. မမိုးဆီပို့လိုက်လေသည်…
“ဟဲ့ ဘာကြီးလဲဟ အဲ့တာပို့စရာလား”. . “မဆန်းပါဘူး မမိုးရယ်..မမိုးလဲရှိတာပဲဟာ”. .. “ဟဲ့ အဲ့လို မပြောရဘူးလေ ငါကနင့်အမနော်..ဟွင်း”. .. မျက်စောင်းထိုးလေသည်… “ကို့အမ မို့ပြတာပါ တခြားသူပြစရာလား ဒီမှာကြည့် အကောင့်မှာ ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ထားတာ”. . အောင်လေး သူ့ဖေ့ဘွတ်ထဲမှ တင်ထားတာများ မမိုးကိုပြလေသည်.. လိုးသည့်ပုံများပင်ပါလေသည်… “တော်ပီ နင့်ဖာသာကြည့်တော့ ရှက်စရာတွေ”. .. “ဟားဟား..မမိုးကလည်းရှက်စရာလား. ကျနော်က လေ့ကျင့်နေတာဗျ ဆော်ရရင် စမ်းကြည့်မလို..”. .. မမိုးတယောက် ပါးစပ်က မကြိုက်ဖူးပြောနေပဲ စိတ်ထဲ ယောက်ယက်ခက်နေသည်… မတ်တော်သူုဖြစ်၍ ဘာမှမပြောတော့ပဲ.. ကို့ဖေ့ဘွတ်ကိုပြန်ကြည့်နေတော့သည်..ညအိပ်ကြလေသည်..
တယောက်တခန်းဆီမို့ ဟိုဘက်ဒီဘက်မမြင်မကြားရပေ… မမိုးအိပ်လို့မရပါ လင်ယောက်ျားကလဲ စာမပို့ ဖုန်းမခေါ်နှင့်မို့ပျင်းနေလေသည်.. ..ထို့စဉ် စာဝင်လာသည်… “မမိုးအိပ်ပီလားဗျ”. . “မအိပ်နိုင်ပါဘူးဟာ..အမြဲတမ်းလှဲနေရတော့ အညောင်းမိတယ်”. . အနှိပ်ခံချင်သလိုဖြစ်နေသည်… “လာနှိပ်ပေးမယ်လေ ကျနော်လည်းအိပ်လို့မရဘူး”. .. ယောက်ခမလည်းအိပ်နေပီဖြစ်၍.. “အင်း..လာခဲ့ ပရုတ်ဆီပါယူခဲ့ဟာ”. . မမိုး စဉ်းစားမိသည် အောင်လေးမှာအခြောက်ကလေးလိုနေ၍ စော်မရှိပဲ အောပုံများကြည့်ကာစိတ်ဖြေသည်ထင်သည်.. သူမ ၏ ကိုယ်လုံးကိုမြင်၍စိတ်ဖြေနေလည်း ကိစ္စမရှိပေ ကိုယ့်ကို မလုပ်ရင်ပီးတာပဲဟုတွေးမိသည်.. ထို့ကြောင့် လာနှိပ်ရန်ခေါ်လေသည်.. အောင်လေး ဘောင်းဘီ အပွဝတ်ထားသည် အောက်ခံက မဝတ်ထား… ..အဆင်ပြေရင် လိုးမည်ဟုတွေးမိနေ၍ဖြစ်သည်.. မမိုးအခန်းထဲရောက်လေသည်.. “မမိုး နေ့လည်ကလိုနှိပ်ပေးမယ်နော်”. . “အင်း နှိပ် ငါလည်းနင့်အကိုဆီ စာပို့နေတာ ခုထိ စာမပြန်ဘူး စောင့်လိုက်အုံးမယ်”. . သူမ ဖုန်းဆက်ပွတ်နေသည်…
အခန်းထဲ မီးပိတ်ထားပီး ညမီးသေးသေးလေသာဖွင့်လေသည်.. အောင်လေး ခြေဖဝါးနှင့် ခြေသလုံးပေါင်များကို နှိပ်ပေးနေရင်း. “မမိုး တင်တွေရောနှိပ်ရမလား..”. . မမိုး က အတွင်းခံ မချွတ်လဲရတာပဲတွေးပီး “အပြင်ကနှိပ်နော် ပီးရင်ခါးနှိပ်”. . အောင်လေး တင်သားများကို ဖြေးဖြေးညစ်ပေးလေသည်… လက်မနှစ်ချောင်းက အတွင်းခံအောက်ခြေနားမှ တင်သားနေရာကို ဖိနှိပ်ပေးသလိုကျန်လက်ချောင်းများ အပေါ်ပိုင်းတင်ကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်.. “အင်း အဲ့လိုက ကောင်းသားဟ.ဘလိုလုပ်တတ်နေတာလဲဟ”. . “ဗီဒီယိုကြည့်ပီးလေ့လာရတာပေါ့မမိုးရဲ့. ကျနော်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးမယ်.ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ”. . အောင်လေး လက်များ ခါးမှ အင်းကျီးအောက်အသာဝင်ဝင်ပီး ခါးမှတင်ဘေးသားကို ပွတ်နှိပ်ပေးရင်း အတွင်းခံကိုအသာလေး ဆွဲချလေသည် တင်သားဝင်းဝင်းကြီးကတဝက်ပေါ်လာလေသည်..
ထိုမှတဆင့်..တင်သားအုံကြီးကို ဖြေးဖြေးနယ်ပေးလေသည်… မမိုးကောင်းလွန်းပီး တင်ကော့တက်လာသည်.. အဖုတ်တွင်းမှာလည်းယားလာလေသည်. ထို့နောက်အောင်လေးက.. ပေါင်အရင်းကိုပြန်နှိပ် ပီးလက်မများက စအိုဘေးသားများကိုနှိပ်ပေးလေသည်.. အတွင်းခံဘောင်းဘီအလယ်ကိုစုကိုင်လိုက်ရာ..အဖုတ် မြောင်းအတွင်း အတွင်းခံအသားကမြုတ်ဝင်လေသည်.. မမိုးငြိမ်ခံရင်းတွေးနေသည်… တကယ်လို့အောင်လေးသာလိုးရင်မည်သူမျှမသိပေ.သို့သော် သူ့မရီးဖြစ်နေ၍ကြည့်ရုံသာကြည့်ပီးနှိပ်ပေးကာ လိုးမည်မထင်..ခံလို့ကအရမ်းကောင်းနေသည်.. အောင်လေး သူ့ဘောင်းဘီအပွကိုအသာလေးချွတ်နေသည်.. မမိုး၏ အတွင်းခံအပျော့လေးကို ဘေးသို့ဖယ်က လက်မက အဖုတ်ဘေးများကိုပါနှိပ်လေသည်..
အရည်စိုစပြုနေသောအဖုတ်ကိုတွေ့လေသည်.. လူငယ်ပေမဲ့လီးက ၇လက်မလောက်ရှည်သည်.. ပေါင်ဖြဲလိုးစရာမလိုပဲ..ကော့တက်နေသောတင်သားကြောင့် အသာလေးလိုးနိုင်ပေသည်.. ချက်ချင်းမလိုးသေးပဲ လက်တဖက်က တင်နှင့်ခါးကိုနှိပေးသလိုတဖက်ကလဲ အဖုတ်ဘေးသားနှင့် အစိကို ပွတ်နေပြန်သည်.. “မမိုးကောင်းလားဟင်..”. . “အင်း ကောင်းလွန်းလို့ အိပ်ပျော်တော့မယ်”. . “အိပ်လေ အမရဲ့ ကျနော် ဖြေးဖြေးနှိပ်မှာပါ”. .. မေမိုးတကယ်မျက်စိစင်းနေလေသည်… တခါမှမခံဖူးသောအရသာကိုရ၍.. ဇိမ်ခံနေလေသည်.. “ဟဲ့ နင့်အမေနဲ့အကိုကိုမပြောနဲ့နော်”. . “စိတ်ချပါ အမရဲ့ ကျနော်က နှုတ်လုံပါတယ်နော်”. …. အောင်လေးရှေ့အသာတိုးပီးလီးကို.. အဖုတ်ဝနှင့်ပွတ်လေသည်….
မေမိုးက လက်မနှင့်ပွတ်တယ်ထင်နေ၍ မပြောသလို..စိတ်ထဲမှာလည်း အလိုးခံချင်နေသည်… ထိုစဉ် အောင်လေး လီးဝင်လာလေတော့သည့်… “အ့.. အောင်လေး..ဘာထဲ့..ဟာ”. . သူမလှည့်ကြည့်စဉ်မှာပဲ လီးက တဝက်ဝင်လေသည်… အ့..အ့…မလုပ်နဲ့ လက်နဲ့ပဲလုပ်… “အမ ရယ် လက်ထက်ကောင်းတာသိရဲ့သားနဲ့”. .. “နင် ဘသူ့မှမပြောနဲ့..အ့..အ့..ရှီး…. ကောင်းလိုက်တာ”. . “အမရယ် အဖအဖုတ်အရည်တွေထွက်နေလို့လိုးပေးတာ အား…ကောင်းလိုက်တာ..”. . မှောက်ယက်ကလေး မမိုးရဲ့ တင်သားနှခုကို ဖြဲကိုင်ပီး ပေါင်ခွ၍ငုတ်တုတ်လိုးပေးလေသည်…
မေမိုးအလိုက်သင့်ကော့ပေးရာ.. လီးတဆုံးဝင်လေသည်….. လိုးကောင်းလွန်း၍အားမရတော့… ဖင်ကြီးကိုဆွဲမထောင်လိုက်ပီး…သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကိုပူးကာ ဆက်တိုက်လိုးပေးလေသည်… “အမ အဲ့တာ ဘော်ဒီ မာဆက်လို့ခေါ်တယ် နေ့တိုင်းလုပ်ပေးမယ်နော်”. .. “မောင်လေးသဘော အခုအမြန်လိုး..အ့.အ့.”. .. ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..လေကန်ထွက်နေသည်… စအိုအတွင်းကိုပါ လက်ညှိုးထိုးထဲ့ပေးသဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်…. “မောင်လေး ရယ် တော်လိုက်တာ..ဟင်း”. . အကို မလိုးတာ၆လာလောက်ရှိသေးသည်.. အဖုတ်က စည်းစည်းပိုင်ပိုင်ရှိလှသည်…
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကိုဗဈအခဈြ